I-Free Image Scraper - i-Semalt Advice
Iwebhu kodwa enye yezixhobo ezilula ukuzisebenzisa kule njongo yi-Savelimlimages. Isizathu esibalulekileyo sokuba usebenzise le sixhobo kukuba akudingi naziphi na izakhono zeprogram. Kwaye, ngaphezu koko, akhululekile!
Indlela esebenza ngayo:
Awunanto ukuchofoza kwimifanekiso enye emva komnye ngenxa yokuba iqhelekileyo kunye nexesha lokuchitha ixesha. Udinga kuphela ukungena i-URL okanye uqhagamshelo kwiwebhusayithi imifanekiso enu uceba ukuyifumana kwisifanekiso esinikeziwe. Emva koko, nqakraza nawaphi na amaqhosha anikezwe ngezantsi. Isixhobo sisindisa yonke imifanekiso efunekayo kwifayile yezip.
Kukho amaqhosha amane ngaphantsi kwaye ayenzela iindlela zokugcina ezahlukeneyo. Kuphela kufuneka ucofe ukhetho olukhethiweyo kuwe. Amaqhosha aqhelekileyo, apheleleyo, aguqayo, kunye neendlela zokulondoloza imifanekiso.
Okungaqhelekanga: Le mode igcina yonke imifanekiso ephambili kwiphepha langoku.
epheleleyo: Le meko ithetha ukugcina imifanekiso esuka kwizithonjana kwiphepha langoku.
Ukuthabatha: Le meko kukugcina imifanekiso kwikhasi lewebhu eliphambili. Nangona kunjalo, kufuneka uqonde ukuba le meko ithatha ixesha elide ukuqhuba.
Unomdla: Le mode igcina imifanekiso eninzi ngokusemandleni kwiphepha langoku kunye namaphepha anxulumeneyo.
Ukusebenzisa esi sixhobo samahhala, kufuneka ubhalise kwi-saveallimages.com..Kukho ezimbini iintlobo zobulungu. Unokuba ngumntu okhululekileyo okanye ilungu le-premium. Enyanisweni, kucetyiswa ukuba ube ilungu elikhululekile ukuzama isixhobo ngaphambi kokuphucula ubulungu bakho.
Njengelungu elikhululekile, unokwenza iifoto ezingama-25 kuphela ngesicelo ngasinye. Ukongezelela, imifanekiso iya kugcinwa ngeempawu ezincinci. Okwesibini, imifanekiso iya kugcinwa kunye namanye ama-watermark kunye neentengiso.
Ngakolunye uhlangothi, njengelungu leprayimm, unokwenza ufike kwi-1500 imifanekiso nganye kwisicelo. Imifanekiso ayiyi kuba neempawu ze-watermark kwaye akukho zikhangiso. Ukongezelela, amalungu kuphela e-premium angasebenzisa zombini ubuhedeni kunye neendlela zokulondoloza ezinobundlobongela. Unokuba yilungu leprayimenti ye $ 3 kuphela ngenyanga.
Isixhobo sisebenza kakuhle kwiziphequluli ezahlukeneyo. Ixhasa i-Opera, i-Safari, i-Internet Explorer, i-Edge, i-Firefox kunye ne-Google Chrome. Ngaphandle koko, isebenza kwi-Android, iWindows ne-IOS. Ungayifumana kwi-Google Play.
Igcina imifanekiso ngobuncinane ubuncinane bee-pixels ezili-150 kunye nokuphakama okuncinane kwama-pixels ayi-150. Njengazo zonke iinkonzo, ihlaziywa rhoqo ngezinye iinkcukacha.
Ngenkqubela, iimpawu ezenza "Gcina yonke imifanekiso" isicelo esilungileyo kunokuba ezininzi ze-web scrapers zilandelayo:
• Kulula kakhulu ukuyiqonda nokusebenzisa;
• Njengoko igcina yonke imifanekiso kwiphepha lewebhu ngokukhawuleza, ilondoloza ixesha elide;
• Ngaphandle kwanokuba abaprogram bangayisebenzisa kuba ayifuni naluphi na ulwazi lwenkqubo;
• Akukho mfuneko yokukhuphela kwaye ufake nayiphi na isicelo;
• Ixhasa zonke iiphequluli neziplani zeselula;
• Okona kubaluleke kakhulu, kukhululekile ngaphandle kokuba ufuna ukuphucula ubulungu bakho.